मृत्युपछि हामी कहाँ जान्छौं ? – jagritikhabar.com
विगतका जीवनका अनुभवहरूका असङ्ख्य अभिलिखित अनि अनुसन्धान गरिएका घटनाहरू स्पष्ट रूपले मृत्युपछि जीवनको सङ्केत दिन्छ । पुनर्जन्मको सबै घटनाहरूमा व्यक्तिको मृत्यु अनि पृथ्वीमा उनको पुनर्जन्म बिच एक चरम अन्तराल पाइएको छ । त्यसो भए, हामी मृत्युपछि पृथ्वीमा पुनर्जन्म हुने समयसम्म कहाँ रहन्छौँ ? के अस्तित्वको लागि एउटा मात्र लोक छ अथवा विविध लोकहरू छन् ? यदि छ भने कुन घटकहरूले यो निर्धारित गर्छ, हामी मृत्युपछि कहाँ जान्छौँ ? यो लेखमा हामी यसको उत्तरको साथै यस शीर्षकसँग जोडिएको अन्य प्रश्नका उत्तर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ । छैटौँ इन्द्रियको विकास भएका एसएसआरएफका आध्यात्मिक साधकहरूले दिएको यी उत्तरहरू यहाँ राखिएको छ ।
आध्यात्मिक अनुसन्धान अनुसार मनुष्यमा निम्नलिखित चार मूलभूत देह हुन्छ । शारीरिक (स्थूल देह), मानसिक(मनोदेह), बौद्धिक (कारण देह), सूक्ष्म अहम् (महाकारण देह) तल दिएको चित्र मनुष्य शरीरको रचना तस्बिर रूपमा देखाउँछ ।
जब मनुष्यको मृत्यु हुन्छ तब भौतिक शरीरको अस्तित्व समाप्त हुन जान्छ; तर अन्य घटकहरू अनि चेतनाको अस्तित्व शेष रहन्छन् । भौतिक शरीरको अतिरिक्त मनुष्यको अस्तित्वको अन्य घटकहरू- सूक्ष्म शरीर (लिङ्ग देह), मनोदेह, कारण देह (बुद्धि) अनि महाकारण देह (सूक्ष्म अहम्) बाट बनेकोलाई सूक्ष्म देह भनिन्छ । यो सूक्ष्म शरीर भूलोक (पृथ्वी) छोडेर अन्य १३ सूक्ष्म लोकहरू मध्ये कुनै एउटा लोकमा जान्छ ।
ब्रह्माण्डमा अस्तित्व मुख्य १४ लोकहरू छन् । ती मध्य ७ लोकहरू सकारात्मक (उच्च लोक) हुन् अनि ७ नकारात्मक हुन् । अस्तित्वको ७ नकारात्मक लोकहरूलाई सामान्यतया नरक (पाताल) भनिन्छ । यी मुख्य लोकहरूमा धेरै अन्य उपलोकहरू हुन्छन् ।
८-९ शताब्दी ईसा पूर्व मा आदि गुरु आदि शङ्कराचार्य अनुसार धर्मलाई वर्णन गरेका छन् । उनका अनुसार धर्म त्यो हो जुन सामाजिक व्यवस्था उत्कृष्ट स्थितिमा राख्दछ, प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक उन्नतिमा सहायक गर्छ, अनि आध्यात्मिक क्षेत्रको प्रगतिमा पनि सहायक हुन्छ ।
अस्तित्वको सात सकारात्मक लोकहरू : यी लोकहरूमा अधिकतर जीवित मनुष्य अनि सूक्ष्म देहहरु रहन्छन् जो धर्माचरण गर्दछन् अनि सकारात्मक साधना मार्ग अपनाएर साधनारत रहन्छन् । यी लोकहरूलाई अस्तित्वको सात सकारात्मक स्तरहरू अथवा सप्तलोक भन्दछ । सकारात्मक साधना मार्ग त्यो हो जसमा साधनाको दिशा ईश्वर प्राप्ति तर्फ हुन्छ । यो आध्यात्मिक प्रगतिको उच्चतम शिखर हो ।
ब्रह्माण्डमा पृथ्वी (भूलोक) नै भौतिक अस्तित्वको एक मात्र लोक हो । यो ब्रह्माण्डको सकारात्मक लोकहरू मध्ये पद क्रममा प्रथम स्थानमा छ ।
अस्तित्वको सात नकारात्मक लोकहरू (पाताल लोक) : यो अस्तित्वको त्यो लोकहरू हुन् जहाँ अधिकतर यस्तो सूक्ष्म देहहरु रहन्छन् जसले धर्म विरोधी कृत्य गरेका हुन्छन् अनि जो साधनाको लागि नकारात्मक साधना मार्ग अपाउछन् । नकारात्मक साधना मार्ग भन्नाले त्यो हो जसको दिशा हुन्छ- आध्यात्मिक बल, उदा.सिद्धि प्राप्ति । प्राथमिक स्तरमा आध्यात्मिक बलको प्रयोग अरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाउनको लागि अथवा नकारात्मक उद्देश्य पूर्तिको लागि गरिन्छ । नरकको कुनै पनि लोकहरूमा जाने सूक्ष्मदेहहरु आफ्नो अनिष्ट हेतुको कारण अनिष्ट शक्ति बन्न जान्छन् ।
पातालको उप-लोक : पातालको प्रत्येक लोकको उपलोक हुन्छ जसलाई नरक भन्दछ । उदाहरणार्थ, पातालको पहिलो लोकको उपलोकलाई प्रथम नरक भनिन्छ । नरक दुष्टतम अनिष्ट शक्तिहरूका लागि (भूत, प्रेत, पिशाच इ.का लागि) आरक्षित हुन्छन् । जुन अनिष्ट शक्तिहरू प्रथम नरकमा रहन्छन् उनीहरूलाई पातालको पहिलो लोकमा रहने अनिष्ट शक्तिहरूको तुलनामा अधिक कालावधि सम्म अनि अधिक कठोर दण्ड भोग्नु पर्दछन् ।
तल दिएको चित्रमा ब्रह्माण्डको १४ लोकहरू देखाएका छन् ।
यस चित्रमा सरलताको लागि हामीले एउटा माथि अर्को लोक दिइएको छ, तर वास्तवमा यी लोकहरू सबै दिशामा हाम्रो चारैतर्फ विद्यमान छन् । पृथ्वी (भूलोक) मूर्त (ठोस) हुनुको कारण देखिन्छ । तर अन्य लोक उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्म हुँदै जान्छन्, त्यसैले स्थूल आँखालाई देखिँदैन । वास्तवमा व्यक्ति भूलोकमा (पृथ्वीमा) रहँदा पनि आफ्नो आध्यात्मिक स्तर अथवा विचारको कारण अन्य लोकहरूको अनुरूप विचार अनि भावनाहरू अनुभव गर्न सक्छ ।
उदाहरणार्थ, ७०% भन्दा अधिक आध्यात्मिक स्तरको सन्तको अस्तित्व, स्वर्गलोक तथा त्यस भन्दा उच्च सकारात्मक लोकमा हुन्छ । यसको विपरीत, चोरीको विचार गर्ने प्रथम पातालको विचार अनुभव गर्दछ, अर्कालाई हानि पराउन चाहने विचार गर्ने दोस्रो पातालको विचारको अनुभव गर्दछ अनि कसैको हत्याको विचार गर्ने सातौँ पातालको विचारको अनुभव गर्दछ । कहिले पनि कुनै दुइटा लोकहरूको अनुभव एक-साथ हुन सक्दैन । उदाहरणार्थ, स्वर्ग अनि महलोक अनुरूप विचार एउटै समयमा आउन सक्दैन ।
वास्तवमा भुवलोक ईश्वरदेखि विमुख क्षेत्र हो; तर पनि हामीले यो लोकलाई सकारात्मक दुखाएका छौँ किनकि यहाँको सूक्ष्म देहलाई आध्यात्मिक प्रगति गर्नको लागि पृथ्वीमा जन्म लिने अवसर मिल्न सक्छ । जब एक पल्ट कुनै सूक्ष्म देह पातालको गहिराइमा झर्दछ, तब उ पृथ्वीमा जन्म लिने अनि ईश्वर प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्ने सम्भावना अल्प हुन्छ ।